FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN'I CAIRN TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an'i Cairn Terrier
Anabelle the Cairn Terrier amin'ny faha-11 taonany
Lisitry ny Cairn Terrier Mix Dogs
Ny Cairn Terrier dia tertera kely matevina miaraka amina endrika amboahaolo. Ny loha dia mivelatra arakaraka ny halavany. Ny molotra mafy dia lava halavany miaraka amin'ny fijanonana voafaritra. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Mainty ny orona. Ny maso lalina sy mivelatra dia miloko hazelà miaraka amin'ny volomaso matevina sy tampon-doha. Ny sofina miorina dia kely ary misaraka malalaka, rakotra volo fohy. Ny rambony dia mitovy amin'ny loha misy volo fohy. Ny palitao marefo, avo roa heny, tsy mahazaka toetr'andro dia manana palitao ivelany henjana misy akanjo lava malemy. Ny palitao dia misy loko na inona na inona afa-tsy ny fotsy, ao anatin'izany ny mena, brindle, mainty, fasika ary alokaloka maro karazana, matetika misy sofina mavo, vava sy rambony. Ny loko palitao farany an'ny Cairn dia sarotra vinavinaina satria niova imbetsaka ny palitao nandritra ny taona maro.
chihuahua cocker spaniel mix amidy
Ny Cairn Terrier dia alika kely mailo, mavitrika, mafy loha, ary kely. Tsy mivadika, te hahafanta-javatra, falifaly, be fitiavana ary sariaka, ankafizin'izy ireo ny milalao amin'ny ankizy. Mahaleo tena, fa hihaino kosa raha mahita fa mahery kokoa noho ny tenany ny olombelona. Ny tompona mpandefitra sy / na mandalo dia hahita fa alika ny alika. Ity karazana ity dia azo ampianarina hanao fikafika. Mpihaza verza tsy misy tahotra sy sahy, tia mihady i Cairns. Amin'ny ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana miaraka amin'ny fitarihana tsy tapaka izy ireo dia ho tony sy mora mandeha. Cairns mifanaraka tsara amin'ny azy ireo trano vaovao . Mila fampiofanana hentitra izy ireo fa tsy henjana. Raha tsy misy ny fitarihana mety , afaka i Cairn manjary manimba sy / na mihombo be ny hoditra . Raha mahita izy ireo a bitro na biby kely hafa dia azon'izy ireo atao ny manenjika azy. Aza avela hivoatra ity alika kely ity Syndrome kely alika , fitondran-tena entanin'ny olombelona izay inoany mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Ny cairns miaraka amin'ity sindromina ity dia hampivelatra ny karazana fahasamihafana isan-karazany amin'ny olana eo amin'ny fitondran-tena, ao anatin'izany fa tsy voafetra ihany fanahiana fisarahana , mafy loha, mitroka, mimenomenona ary miambina.
Haavony: Lehilahy 10 - 13 santimetatra (25 - 33 cm) Vavy 9 - 12 santimetatra (23 - 30 cm)
Lanja: Lehilahy 14 - 18 kilao (6 - 8 kg) Vavy 13 - 17 pounds (6 - 8 kg)
Matetika tsy mahazaka parasy. Mora mahazo lanja.
Ny Cairn Terrier dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Mavitrika be izy io ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Alika kely mavitrika ireto izay mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, satria ny karazany rehetra dia tsy hanatanteraka ny toetrany voalohany handehanana ny lalao. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra malalaka azo antoka tsy hitarika, toy ny tokotany malalaka sy mimanda.
Alika kely 2-10 eo ho eo
Ity palitao miseho 'voajanahary' ity dia tena mila fikojakojana kely ary ny palitao tsy raharahaina dia nanjary korontana sy malahelo. Borosio im-betsaka isan-kerinandro, malemy paika amin'ny palitao malemy. Rano indray mandeha isam-bolana, sasao ny alika ary sasao ny akanjo rehefa maina. Arosoy manodidina ny masonao sy ny sofinao amin'ny hety matevina ary tendaho matetika ny hoho. Ny Cairn dia mandatsaka kely fotsiny.
Ny Cairn Terrier dia niandoha tamin'ny taona 1500, tany amin'ny Highlands of Scotland sy the Isle of Skye ary iray amin'ireo terriers tany Scotland tany am-boalohany. Tamin'ny fotoana iray dia noheverina ho mitovy karazana amin'ny Terrier Scottish ary ny West Highland White Terrier hatramin'ny taona 1900 rehefa nanomboka nitombo isan-karazany ny karazany. Ny Cairn koa dia voalaza fa misy ifandraisany amin'ny Skye Terrier . Ny Cairn dia nantsoina tamin'ny fomba nivezivezena tao anaty 'cairns' ary niondrika tamin'ny amboahaolo sy badger mandra-pahatongan'ny tantsaha namono azy ireo. 'Cairns' dia lava-bato izay onenan'ireo badger sy amboahaolo, mazàna amin'ny antontam-bato kely ampiasaina hanamarihana ny sisintany sy fasana skotika. Ny karazany dia naseho ampahibemaso tamin'ny 1909 ary nanjary nalaza taorian'ny taona 1930. Ity dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1913. Cairn Terrier no nilalao an'i Toto tao amin'ny 'The Wizard of Oz.' Ny talenta sasany an'i Cairn dia ny fihazana, ny fanarahana, ny fitsapana any an-toerana, ny fiambenana, ny hakingana, ny fankatoavana amin'ny fifaninanana ary ny fanaovana tetika.
Scottie the Cairn Terrier eo amin'ny 3 taona eo ho eo— 'Voavonjy i Scottie satria niadana ny fiara teo alohanay ary nanary azy tamin'ny lalana miverina. Izy dia korontana ary hoditra taolana. Izaho efa nikarakara azy ary niverina soa aman-tsara. Handeha any amin'ny fonenany vaovao mandrakizay izy tsy ho ela. Izy dia tena hendry, mahatoky ary tovolahy kely milamina izay mahalala hoe rahoviana no hilalao ary rahoviana no ho mora raisina. Ankizy mahafinaritra izy! Ny alika mpiompy ahy tsara indrindra. Miarahaba an'i Scottie ao amin'ny tranonao vaovao !! '
Scottie the Cairn Terrier eo amin'ny 3 taona eo ho eo manao a kibony kambana alika
Whitty-Sue ilay Cairn Terrier amin'ny faha-3 taonany
'Harper the Cairn Terrier amin'ny 9 herinandro dia vao herin-bundle ! Sarotra ny namelana azy hijanona elaela ampy hahazoana ity sary ity fotsiny. '
Bonnie the brindle mainty Cairn Terrier tamin'ny faha-3 taonany— 'Novidiko tamin'ny mpiompy i Bonnie fony izy alika kely 10 herinandro. Izy dia tena manan-tsaina firavaka. Tiany ny mandeha manjono sy mitsangantsangana ary tiany ny rano. Ataony tsy misy voalavo, gopera ary bitro ny tokotaninay. Tiany ny manenjika fiaramanidina, alika ary buzzard, ary tsy mampiseho tahotra na inona na inona. Mandeha kilometatra 1/2 izahay mandeha isan'andro . Bonnie dia hyper be tamin'ny taonany voalohany, ary nilamina be izy. Ny hany olana nitaizako azy dia ny fialako aminy fitsakoana . Tena nahafinaritra sy nahafinaritra be izy. Tsy fantatra izay hataoko raha tsy eo izy. '
Bonnie the brindle mainty Cairn Terrier tamin'ny faha-3 taonany
Bonnie ilay brindle mainty Cairn Terrier tamin'ny faha-3 taonany tao anaty rano niaraka tamin'ny akanjo fohy namboarina.
Bonnie the brindle mainty Cairn Terrier amin'ny maha alika kely azy
Hijery ohatra misimisy momba ny Cairn Terrier
Sary Cairn Terrier 1
Sary Cairn Terrier 2
Sary Cairn Terrier 3
Alika Cairn Terrier: Sarivongana Vintage azo angonina
Weiner alika Cocker spaniel afangaro
sary an'ny pit bull terrier
schnauzer kely kely fotsy sy fotsy
yorkie lava volo chihuahua mifangaro